Qiimaha kirooyinka guryaha oo kor u kacey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qiimaha kirooyinka guryaha oo kor u kacey
La daabacay måndag 8 april 2013 kl 12.05
Is-bedel ballaaran ayaa ku dhacey kirooyinka guryaha, dabdeed kolkii is-bedel lagu sameeyey xeer u fasaxayey mulkiileyaasha guryaha iney gacan labaad ku kireeyn karaan, isla-markaana kiro dheeri ah ka qaadan karaan macaamiisha ey guryaha ka kireeyaan.
Magaalada Istockholm ayey tiro ahaan kor u kaceen guryaha la kireeysto, isla-markaana ka qaaliyoobeen. Halka faras-magaalaha Istockholm ey kirooyinku kor u kaceen 19% muddo sannad gudihiis ah.
Waa mid lala yaabo iney isku mar kor u kacaan tirada guryaha la kireeysan karo iyo qiimaha kiradaba, sida uu sheegay Stellan Lundström, ahna caalin ku takhasusay culuunta dhaqaalaha ee ra'sumaalka aan guurin kana howl-gala jaamicadda KTH.
Caalinka ayaa sheegay mar uu u warramayay war-geeyska maalinlaha ee SvD in kor u kaca kirooyinka ey ugu wacan yihiin baahida badan ee loo qabo iyo bulshada faraha badan ee u soo guureysa magaalada Istockholm.